Ukudipha izinkomo nokubaluleka kwako – The Ulwazi Programme
Idiphu indawo eyakhiwayo buqamama nemizi yabantu, ngoba idinga indawo enkulu, bese kuba nendlu yokugcina imithi noma amakhemikhali asetshenziswa emanzini. Umdiphi uyafundiswa futhi ukuxuba lomuthi wokugeza izinkomo, ukuze angenzi iphutha ngoba lomuthi ungaba nobungozi uma ungathakiwe ngendlela.
Idiphu lakhiwe ngezingodo eziqinile laba yindilinga noma ibe namakhona, bese kuba nendawo embiwe yashona yase ikhonkwa. Kungena inkomo eyodwa ngesikhathi. Esikhathini samanje umdiphi sekuba ngumuntu okwaziyo ukubhala nokwaziyo ukufunda, unebhuku abhala yonke imininingwane yezinkomo zabantu endaweni nabo abanikazi bezinkomo banawo amabhuku afana nawomdiphi abagcina imininingwane yezinkomo zabo nezinsuku ekufanele ziyiswe ngazo ediphini. Uma sekukhona inkomo efile umdiphi nomnikazi wayo bayayesula emabhukwini noma kukhona inkomo oyithengile uyakoyibhalisa kumdiphi kubaluleke kakhulu ukuthi kuxhunywane nomdiphu ngalokhu. Uma kukhona inkomo efile kuthathwa ubende luhanjiswe kumdiphi kungabe izifele noma ihlatshiwe, lokhu kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi ayisekho, uma izifele ubende aludliwa luyalahlwa.
Ngubani umnikazi wediphu?
Uhulumeni onikezela ngamadiphu emphakathini yasemakhaya, loluhlelo lwasemakhaya kubantu abanemfuyo, ludinga indawo enkulu. Ngenxa yobungozi bemithi esetshenziswayo akufanele lwakhiwe emzini womuntu futhi yingoba kuyabiza ukwakha idiphu. Uhulumeni okhokhela zonke lezondleko zediphu nezendawo ekuzokwakhiwa idiphu kanye namakhemikhali lawo ageza izinkomo.
Kubalulekile ukuthi kudishwe izinkomo ngoba kusuke kuvikelwa inkomo ukuthi ingabi namazenze, nezinye izinambuzane ezingaba yingozi enkomeni. Uma inkomo isinamazenze amaningi ibanenkinga yokudla igule njalo okungaholela ekutheni ife. Umphakathi kunemali okumele uyikhokhe kwenzele ukuthi umdiphi azothola iholo ngomsebenzi wakhe. Ngemuva kwesikhathi esibekiwe umdiphi kuba nezifundo azitholayo mayelana nezinkomo. Umdiphi ukhethwa umphakathi kanye neNkosi yaleyondawo, ukhethwa ngobuqotho bakhe nokungenzeleli nokumela iqiniso. Izinkomo esezikhulile ezihamba idiphu, amathole nezigulayo azivumelekile.